swimsuits – FemaleWear.net
ကြွေလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နတ်သမီးလေးလိုလှတဲ့ fitness model လေး
ခန္ဓာကိုယ် ခပ်ဟော့ဟော့လေးရထားတာလည်း တကယ့်ကို ဖက်ရှင်တစ်ခုပါပဲ။ Sexy ကျကျလေးဝတ်မလား?2pieces လေးနဲ့လား? အရမ်းမိုက်တဲ့ body ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ဖက်ရှင်ကျကျ အထာကျကျဖြစ်နေဉီးမှာပဲလေ။ Foreign နိုင်ငံတွေ ကိုယ်တွေနိုင်ငံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွက် fashion တွေကလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ အခုပြောပြချင်တာလေးကတော့ တကယ့်ကို…
Revolve ရဲ့ Swinsuit Collection အသစ်နဲ့ တွေ့ရတဲ့ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner
Revolve ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ swimwear collection အသစ်ရဲ့ campaign မှာ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner တို့ ညီမနှစ်ယောက်လုံးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၁၀၇ မှာကတည်းက Revolve ရဲ့ပထမဆုံး swimwear collection ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Kylie…
Instagram မှာ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ Bikini Fashion အသစ်
ကမ်းခြေဘဲသွားသွား အိမ်မှာဘဲရေကူးကူး bikini ဝတ်ရတာကြိုက်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အခု Instagram မှာခေတ်စားနေတဲ့ bikini design အသစ်လေးတွေကို လက်တို့ပါရစေ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ bikini လှလှလေးတွေဝတ်ပြီး ကမ်းခြေတို့ ရေကူးကန်တို့မှာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ချင်တာလည်း အိပ်မက်တစ်ခုထဲမှာ ပါပါတယ်။ သင်ရော အဲ့လိုအိပ်မက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူလား?…